May 4, 2020 - UpdateNew
ဗိုက်ပြုတ်ဆေးနည်းလေး တင်ပေးဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပြီ
May 4, 2020 UpdateNew 0
ဗိုက်ပြုတ်ဆေးနည်းလေး တင်ပေးဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပြီ ဗိုက်ပြုတ်ဆေးနည်းလေး တင်ပေးဆိုလို့ပါ သံပုယိုသီ3းလုံး ကြက်သွန်ဖြူအတက်ကြီး5တက် ဂျင်းအနေတော်အတက် တစ်တက် ပထမဆုံး သံပုယိုသီးကို 4စိတ်ထိုး, ကြက်သွန်ဖြူ5တက်အခွံခွါ, ဂျင်းကိုအခွံခွါ ပါးပါးလှီး ရေ2လီတာ ပွက်ပွက်ဆူထဲကို ခုနကလှီးတာတွေထည့်ပီး နာရီဝက်ပြုတ် ပြီးရင်အဖတ်တွေဆယ်ပီးပစ်လိုက်ပါ!! အရည်ကိုအအေးခံပီး အစာမစားခင်နာရီဝက်အလိုမှာ ဖန်ခွက်တစ်ခွက်စာသောက်ပေးပါ တစ်နေ့3ကြိမ်ပေါ့ […]
သူလျှိုတွေရဲ့ ဖော်ထုတ်ချက်အရ တရုတ်ဟာ တခြားနိုင်ငံတွေ ဆေးမဖော်နိုင်အောင် တမင်နှောက်ယှက်ခဲ့ဟုဆို
သူလျှိုတွေရဲ့ ဖော်ထုတ်ချက်အရ တရုတ်ဟာ တခြားနိုင်ငံတွေ ဆေးမဖော်နိုင်အောင် တမင်နှောက်ယှက်ခဲ့ဟုဆို The Sun သတင်းစာပါ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အရ တရုတ်အာဏာပိုင်တွေဟာ တခြားနိုင်ငံတွေ ဆေးမထုတ်နိုင်အောင် တမင်နှောက်ယှက်မှု ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဝူဟန်ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ရလဒ်တွေ၊ မှတ်တမ်းတွေ၊ အထောက်အထားတွေကို အလျှင်အမြန် ဖျက်ဆီးလိုက်ခြင်းနဲ့ဒီရောဂါပိုးအကြောင်း ကမ္ဘာကို ပြောပြချင်တဲ့ ပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ […]
ပိုးတွေ့ မိဘနှစ်ပါးဆီက သမီးနှစ်ဦး ထပ်ကူးစက်
ပိုးတွေ့ မိဘနှစ်ပါးဆီက သမီးနှစ်ဦး ထပ်ကူးစက် ပိုးတွေ့လူနာတွေနဲ့ ထိတွေ့ရာကaန ရန်ကုန် Quarantine စင်တာတစ်ခုမှာ မိသားစုလိုက် Quarantine ဝင်ရာကနေ ဖခင်နဲ့ မိခင်(Case 101၊Case107)နှစ်ဦးလုံး ပိုးတွေ့လူနာအဖြစ် ဧပြီလ ၁၉ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာပြီးတဲ့နောက်၊Quarantine စင်တာမှာ ကျန်နေခဲ့တဲ့ သမီးနှစ်ယောက်လည်း […]
ထောင်ထွက် ပါပဲ ..လုပ်ရက်လိုက်တာ
ထောင်ထွက် ပါပဲ ဗျာ ..လုပ်ရက်လိုက်တာ စိတ်မနှံ့တဲ့ အဘွားကြီးတစ်ဦးကို မုဒိမ်းကျင့်၊ အကျီ င်္နဲ့ ပါးစပ်နှာခေါင်း၊ လည်ပင်းတွေကို ပိတ်ဆို့သတ်ပစ်သူ တရားခံ(၂)ဦးအား ဖမ်းမိ ၃.၅.၂၀၂၀ရက်ည၁၂နာရီအချိန်ခန့်ကစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊စစ်ကိုင်းမြို့မရဲစခန်းသို့အသက်၄၆နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကလာရောက်တိုင်တန်းသည်မှာ၎င်းးသည်3-5-2020နေ့တွင်ညပိုင်းအချိန်၌နေအိမ်၌ရှိနေစဉ် ၎င်း၏မိခင်တော်စပ်သူဒေါ်……(၆၅)နှစ်သည်စိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်သောကြောင့်ရပ်ကွက်အတွင့်လှည့်လည်သွားနေစဉ်ည၁၀နာရီ၄၅မိနစ်အချိန်ခန့်တွင်ငါးထပ်ကြီးဘုရားမြောက်ဘက်ဆောက်လက်စဓမ္မာရုံအောက်တွင်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်မှာပက်လက်အနေအထားနှင့်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကားနေကာဒဏ်ရာအချို့ရရှိပြီးသေဆုံးနေကြောင်းသိရှိရသောကြောင့်ဆောက်လက်စဓမ္မာရုံသို့သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ရာ မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်မှာပက်လက်အနေအထားနှင့်ဒဏ်ရာတစ်ချို့ရရှိကာသေဆုံးနေကြောင်းသိရှိရသောကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်—-ကိုသတ်သွားသူကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးအပြစ်ပေးအရေးယူပေးပါရန်တရားလိုပြုလု့ပ်တိုင်တန်းခဲ့ရာ စစ်ကိုင်းမြို့မရဲစခန်းမ(ပ)၄၃၆/၂၀၂၀ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ၃၇၆/၃၀၂အရအမှုရေးဖွင့်ပြီးစစ်ဆေးရာသေဆုံးသူဒေါ်သည်ပက်လက်အနေအထားနှင့်အောက်ပိုင်းအဝတ်အစားမဲ့ပေါ်နေပြီး၎င်းတွင်နောက်စေ့ဖူးရောင်ဒဏ်ရာ၊ဘယ်ဘက်နံရိုးကျိုးဒဏ်ရာ၊အဆုပ်ဒဏ်ရာတို့ရရှိကာအဓမ္မပြုကျင့်ခံရသည့်အနေအထားနှင့်သေဆုံးနေသောကြောင့်ရဲဆေးစာပေးပို့ကာပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ကာဓမ္မာရုံအနီးကသက်သေကို…..နှင့်ကို…..အားမေးမြန်းစုံစမ်းခြင်း၊ဒါးဝယ်ဈေးတိုက်နယ်ကဦး…..၏ပြောပြချက်အရသေဆုံးသူဒေါ်—— ကိုအဓမ္မပြုကျင့်ကာသတ်သွားသူနှစ်ဦးမှာ ဇင်မျိုး(ခ)ဂျက်(၂၄)နှစ်၊ကျဘမ်းနှင့်အောင်ကျော်ထက်(ခ)စိုးပေ(၁၇)နှစ်တို့နှစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသောကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကည၁၀နာရီ၃၀အချိန်မှာပင်ကျူးလွန်သူနှစ်ဦးစလုံးကိုလက်ရဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးစစ်ဆေးခဲ့ရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဇင်မျိုးသည်ဆိုင်ကယ်ခိုးမှုနှင့်ထောင်ကျခဲ့ရာမှယခုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့်ထောင်မှလွတ်လာသူဖြစ်ကြောင်းဇင်မျိုးနှင့်စိုးပေတို့သည်အခင်းဖြစ်ညကဓမ္မာရုံအနီးရှိနေခဲ့ကြစဉ်စိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူဒေါ်—ကိုဖရိုဖရဲနှင့်မြင်ခဲ့ရာကကြံမိကြံရာအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ပြီးရုံးကန်သဖြင့်ပုလင်းနှင့်နံရိုက်ကာအဝတ်အစားနှင့်လည်ပင်းညှစ်သတ်ခဲ့မိကြောင်းပေါ်ပေါက်ချက်အရအသေးစိပ်စစ်ဆေးကာဥပဒေအရတရားစွဲတင်ပို့မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ဦးဝိလာသ(S Hသတင်းဌာန)စစ်ကိုင်းတိုင်း […]
ထိုင်းနိုင်ငံမှပြန်လာသည့် မြန်မာအမျိုးသား ၁ ဦး မြဝတီဆေးရုံတွင် သေဆုံး ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မဲဆောက်မြို့ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ပြီး ဘီးလင်းမြို့ကိုပြန်မယ့် အသက် ၇၀ နှစ်ဝန်းကျင်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ မြဝတီမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာ မေလ ၄ ရက် မနက်က သေဆုံးသွားပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် မြန်မာ-ထိုင်းချစ်ကြည်ရေးတံတားအမှတ်(၂)ကနေ ဒီကနေ့ မေလ […]
နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က စစ်သည် ၁ ဦးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ပိုးတွေ့
နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က စစ်သည် ၁ ဦးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ပိုးတွေ့ နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ စစ်သည် ၁ ဦးမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိရတယ်လို့ တပ်မတော်က သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တပ်မတော်ထဲမှာ ပထမဆုံး ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းညီက ပြောပါတယ်။ အဆိုပါ […]
မြန်မာအလုပ်သမား ၂ သောင်းခွဲလောက် ထိုင်းနိုင်ငံက ပြန်ဖို့ စာရင်းပေး
မြန်မာအလုပ်သမား ၂ သောင်းခွဲလောက် ထိုင်းနိုင်ငံက ပြန်ဖို့ စာရင်းပေး ထိုင်း – မြန်မာနယ်စပ်တွေကနေ နေရပ်ပြန်ဖို့ မြန်မာအလုပ်သမား ၂၅,၀၀၀ စာရင်းပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းသတင်းထောက် မအေးအေးမာက တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ အရေးပေါ်ကာလအမိန့် ထုတ်ပြန်ထားချိန်မှာ ခရိုင်တခုနဲ့ တခုနယ်မြေ ဖြတ်သန်းသွားလာဖို့ ကန့်သတ်ထားတာကြောင့် […]
မလုပ်သေးလို့ပါနော်…မြန်မာတွေ တကယ်လိမ်ရင် ပေါက်ဖော်ကြီးလည်း မခံနိုင်ပါဘူး..
မလုပ်သေးလို့ပါနော်…မြန်မာတွေ တကယ်လိမ်ရင် ပေါက်ဖော်ကြီးလည်း မခံနိုင်ပါဘူး.. မြန်မာတွေ တကယ်လိမ်ရင် ပေါက်ဖော်ကြီးလည်း မခံနိုင်ပါဘူး.. ဖြစ်ပုံက ဒီလို .. တရုတ်ပြည်က… ကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြွေပွေးတွေကို..ဈေးကောင်းပေးပြီးဝယ်တာ ခင်ဗျားတို့လဲကြားဖူးမှာပေါ့…ဈေးကောင်းရသတဲ့ဟေးး …ဆိုတာနဲ့ ကျုပ်တို့နိုင်ငံက သကောင့်သားတွေက မြွေပွေးဖြစ်ပြီးရောဆိုပြီး သေးသေးကြီးကြီးအကုန်ဖမ်းပြီး မြွေပွဲစားကတဆင့် တရုတ်ပြည်ကိုရောင်းကြသတဲ့..! ဖြစ်ချင်တော့. မြွေပွေးမှာ …မျက်ပြူးနဲ့မျက်မှေးဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်..တရုတ်တွေဝယ်တာက […]
စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ပြန်ဖွင့်တော့မည်ဖြစ်၍ ရောဂါကူးစက်မှု များလာနိုင်ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ပြော
စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ပြန်ဖွင့်တော့မည်ဖြစ်၍ ရောဂါကူးစက်မှု များလာနိုင်ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ပြော မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ဖြစ်ပွားတာကို အတိုင်းအတာတခုအထိ ကာကွယ်ထိန်းချုပ် နိုင်ပြီဖြစ်ပေမယ့် လူထုထဲမှာ ကူးစက်ဖြစ်ပွားတာ ရှိနေနိုင်သလို စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ ပြန်ဖွင့်တော့မှာ ဖြစ်လို့ ရောဂါကူးစက်တာ များလာနိုင်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ […]
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့်လွတ်လာသူက ဆွမ်းခံကြွလာသောဆရာတော်အား ငှက်ကြီးတောင်ဓားနဲ့ခုတ်သတဲ့
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့်လွတ်လာသူက ဆွမ်းခံကြွလာသောဆရာတော်အား ငှက်ကြီးတောင်ဓားနဲ့ခုတ်သတဲ့ နိုင်ငံတော်ကစေတနာနဲ့လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးတာကို ထောင်ထဲမှာပဲနေချင်တဲ့ကောင်ပဲ…ပြည်သူတွေကကိုဗစ်ကြောက်ရတာတစ်မျိုး ထောင်ထွက်ကြောက်ရတာတစ်မျိုး…. ၂၀၂၀/မေ/၁/ ၀၆း၅၀ ချိန်ခန့်က ၊တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး ကော့သောင်းမြို့၊အဏ္ဏဝါရပ်ကွက်၊တောင်ပေါ်ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်မှ…လက်ထောက်ဆရာတော်၊စာသင်စာချ ကိုယ်တော် ဘဒ္ဒန္တ ကုသလ ၊သက်တော်(၄၉) ဝါတော်(၃၀)သည် တပါးတည်းသီတင်းသုံးရာအဆောင်မှ ဆွမ်းခံကြွရန်ထွက်လာစဉ် ကျောင်းဝင်းအတွင်း တွင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့်လွတ်လာသူ ထောင်ထွက် (အလုပ်လက်မဲ့ […]